दुःखबाट मुक्ति पाउन, सन्तान लाभ हुन, पदोन्नति हुन, निरोगी हुन यो मन्दिरमा एकपटक दर्शन गर्न पुग्ने हरेकको मनोकामना पुरा हुन्छन् ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/दुःखबाट मुक्ति पाउन, सन्तान लाभ हुन, पदोन्नति हुन, निरोगी हुन यो मन्दिरमा एकपटक दर्शन गर्न पुग्ने हरेकको मनोकामना पुरा हुन्छन् !
त्यस ठाउँको पश्चिमी कुनाबाट हात थापेर महादेवसँग दूध माग्ने प्रचलन छ । दूध माग्दा भाग्यमानीको हातमा दूध र अभागीको हातमा पानी झर्ने विश्वास गरिन्छ । त्यस्तै सोही ठाउँदेखि उत्तरी दायाँ कुनामा हात्तीको सुँडमा गणेशको मूर्ति छ । बसाहा गुफामा नन्दी भृंगीको मुर्ति, गौरीशंकर, गोमन सापलगायतका प्राकृतिक मूर्ति पनि छन् । भैरव गुफा महादेव गुफादेखि करिब ३० मिटर पूर्वतिर आकर्षक भैरव गुफा छ । यस गुफाको पनि आफ्नै महत्व र विशेषता छ ।
हलेसी महादेवको दर्शन गरेमा खडेरीबाट मुक्ति पाउने, दुःखबाट मुक्ति पाउने, सन्तान लाभ हुने, पदोन्नति हुने, निरोगी हुने जनविश्वास छ। महादेवलाई भस्मासु राक्षसबाट बचाउन मोहनी रूप धारण गरी भगवान विष्णु कैलाशबाट यस ठाउँमा आएको शास्त्रीय मान्यता छ । मोहनीले राक्षसलाई झुक्याएर भष्म गरिदिएकी थिइन्, जसको अवशेष भैरव गुफामा रहेको विश्वास गरिन्छ ।
आइतबारदेखि भारतले सबै सीमा नाका बन्द गर्ने तर नेपाललाई कुनै असर नपर्ने
काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा,जात्रा पर्वमा भीडभाड नगर्न आग्रह